Manomana fitsangatsanganana ~ Journey-Assist - Ny drafitra fitsangatsanganana dia ity -
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » Mikasa fitsangatsanganana
Mila manangona fampahalalana voalohany momba ny vidin'ny tapakila, vidim-piainana ianao, fandaniana isan'andro amin'ny zava-pisotro, fitsangatsanganana, famindrana. Mazava ho azy, aza adino ny vidin'ny fiantohana, visa (raha ilaina).
Hahafantatra ireo fijery sy toerana mahaliana eto amin'ny firenena izay alehanao. Raha manana zanaka ianao dia fantaro tsara ny fisian'ny fotodrafitrasa sy ny fialamboly ho azy ireo. Miorina amin'ity fampahalalana ity dia atorio moramora ny lalana sy ny fizotry ny fihetsik'izy ireo.
Pasipaoro (ho azo antoka fa misy pejy maimaimpoana, ary mbola misy 6 volana alohan'ny hifarana ny antotan-taratasy). Aza hadino ihany koa fa hikarakara fahazoana ny fiantohana ara-pahasalamana. Raha ilaina dia alaivo mialoha ny visa. Ao amin'ny tranonkala masoivoho manokana dia misy ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny fitsipika ahazoana visa isan-karazany.
Ny fomba iray mety dia ny fandalinana ireo loharanom-pahalalana vaovao amin'ny agregatorika amin'ny Internet izay natao hikaroka sidina an'habakabaka an-jatony manerantany mba hikarohana ireo tolotra mahasoa indrindra ho anao. Eny, na ny tsotra indrindra ary tsy dia mahomby dia ny fitsidihana pejy ny loharanon-tsaintsika natao hamahana ny tinona no asa.
Tahaka ny an'ny drafitra teo aloha, ity asa ity dia afaka manampy koa. pejy amin'ny loharanon-karena. Na, miverena manampy ny Internet, izay ahitanao tranonkala manokana - mitady agregator ho an'ny hotely. Aza hadino ny mandinika ny famindrana ny toerana hahatongavan'ny firenena mankany amin'ny hotely.